प्रहरी चौकीमा दुई युवतीको जात्राः हामी बिहे गर्न चाहन्छौं, सुरक्षा दिनुस् ! – Todays Nepal
प्रहरी चौकीमा दुई युवतीको जात्राः हामी बिहे गर्न चाहन्छौं, सुरक्षा दिनुस् !
प्रहरी चौकीमा २ जना युवती पुगे । उनीहरुलाई परेको समस्या सोध्न एक प्रहरी अघि सरे । जब ती प्रहरीले ती युवतीको समस्या सुने त्यसपछि भने प्रहरी नै चकित परे । उनीहरुले आफूहरुले बिहे गर्न चाहेको भन्दै यसका लागि सुरक्षा मागिरहेका थिए । केहीबेर ती दुई युवतीको ‘ड्रामा’ चल्यो । यत्तिकैमा दुवैका परिवार पनि प्रहरी चौकी पुगे ।
परिवारका सदस्यले दुवै युवतीलाई सम्झाउने निकै प्रयास गरे तर दुवै आफ्नो अडान छाड्न तयार भएनन् । अन्ततः प्रहरीले उनीहरुलाई महिला थानामा पठाएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको भगवान कृष्णको थलो मथुरामा यस्तो विचित्रको घटना भएको हो । यहाँको यमुनापारको लक्ष्मीनगरमा एक ब्युटी पार्लरमा सँगै काम गर्ने क्रममा ती दुई युवतीको प्रेम सुरु भएको बताइएको छ ।
प्रहरीमा पुगेका दुवै युवतीले आफ्नो बिहेको लागि सुरक्षा उपलब्ध नगराए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत दिए । जानकारी पाउनासाथ परिवार पनि थानामा पुगे । परिवारले दुवैलाई सम्झाइबुझाइ गरेर घर लैजाने कोसिस गरे तर दुवैले मानेनन् । अन्ततः दुवैका परिवार रिसाएर घर फर्के । बिहे गर्न चाहने युवतीहरुको उमेर २० वर्ष र १८ वर्ष छ । २० वर्षकी शिवानी र १८ वर्षकी दिप्तीले ३ महिनादेखि आफूहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको बताएका छन् ।
चौकीमा युवतीले फिल्मी शैलीमा भने ‘प्रेम गर्नु हुनै पाप होइन । हामीलाई कसैसँग कुनै मतलब छैन । हामीले आपसमा प्रेम गरेका हौं र सँगै बाँच्न चाहन्छौं । यी दुईमध्ये शिवानी थानामा युवकजस्तो गरी प्रस्तुत भएकी थिइन् । प्रहरीले उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयास भइरहेको र उनीहरुले नमानेमा अगाडि के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएको छ । भिडियो हेर्नुहोस् :
जातीय विभेद: १७ दिनमा विवाह तोडियो, फिल्मी शैलीमा भयो पुनर्मिलन
दुई टाउको र दुई मुटु भएका विचित्र बच्चाको जन्म, भगवान सम्झेर पूजा गर्नेको भीड,यस्तो सम्म देखियो